Ulo oru China DF-D / C Ugbo abuo na ndi n’enye ya | ZHONO
Ihe eji eme aru oru 1. Ihe eji eme otutu ihe eji eme otutu uzo dika ihe siri ike n’agba oso. 2. A na-etinye efere mmetụ aka na akụkụ ọkụ ma akụkụ nju oyi maka ebuli ọkọlọtọ nchekwa na nchekwa na ntụkwasị obi. 3. A na-emepụta efere na-ekpo ọkụ dịka nke National Security Standard of Pressure Vessel nwere ụdị Sịksi ikuku ikuku n'ime iji meziwanye ogo uzuoku ya na ọgịrịga na-agba ume iji mee ka ha nwee ọdịdị n'okpuru okpomọkụ dị elu. 4. Uzuoku ...
1. A na-eme ụlọ ahụ dum ka ọ dị ike n ’ọwa na - arụ ọrụ maka ịgbanye ọsọ na oke ọsọ.
2. A na-etinye efere mmetụ aka na akụkụ ọkụ ma akụkụ nju oyi maka ebuli ọkọlọtọ nchekwa na nchekwa na ntụkwasị obi.
3. A na-emepụta efere na-ekpo ọkụ dịka nke National Security Standard of Pressure Vessel nwere ụdị Sịksi ikuku ikuku n'ime iji meziwanye ogo uzuoku ya na ọgịrịga na-agba ume iji mee ka ha nwee ọdịdị n'okpuru okpomọkụ dị elu.
4. A na-agafe mbata Steam na mpụta ya na ọkpọkọ maka ọkwa edo edo nke efere dị ọkụ.
5. Akụkụ ụgbọala ahụ na-adọkpụ roba na-enweghị paịlo na-agbadata iji belata ugboro ole bel na-adaba iji kwụsie ike.
6. Ogwe isi mbanye ka ahịrịpụtara na ọsọ ọsọ iji nọrọ n’ahịrị na igwe anụcha.
7. A na-anabata moto ugboro ole maka ịgbanwee ọsọ ọsọ ma kwụsie ike.
8. Igbe dị iche iche dị na igbe bevel nke nwere ezigbo nkenke na ike ya mere nke ezigbo alloy steel nke mesoro iji kpo oku na akwa dị mma maka mkpọtụ dị ala na nnukwu iyi iyi, dị mfe maka ọrụ na ndozi.
9. Mpempe mmanụ dị iche iche ejiri ọkpọkọ pọpụl pọpụpọ na-acha odo odo na-ahazi na ebe a na-agbanye ma gia iji mee ka mma iji rụọ ọrụ igbe.
Speedgba ọsọ ọsọ (m / min) 100, 150, 200, 250, 300
Nke gara aga: Igwe na-ete igwe na –enweta zuru oke
Osote: CSM-8 NC Single-corrugated Slitting, Cutting & Stacking Machine
CSM-8 NC Single-corrugated Slitting, Mgbuji…
Ngwunye Ngwakọta ọkụ siri ike nke DHSL